Ujongo lokuJonga uluntu
I-4K yePlastiki Series
MM27 uthotho olugobileyo
YM32 Series igophe
UKUHLOLWA KWEZOTHUTHO LWEMARITIME-2021
KuPhononongo lwayo lwezoThutho zaseLwandle ngo-2021, iNkomfa yeZizwe eziManyeneyo kuRhwebo noPhuhliso (i-UNCTAD) yathi ukunyuka kwamaxabiso eekhonteyina okukhoyo ngoku, ukuba kuyagcinwa, kunokunyusa amaxabiso okungenisa elizweni nge-11% kunye namaxabiso abathengi nge-1.5% phakathi ngoku. kunye no-2023. Impembelelo ye...
Amazwe angama-32 e-EU aphelise imirhumo ebandakanyayo e-China, eya kuphunyezwa ukusuka nge-1 kaDisemba!
I-General Administration of Customs of the People's Republic of China nayo ikhuphe isaziso kutsha nje esichaza ukuba, ukususela ngomhla woku-1 kuDisemba 2021, iSatifikethi seNkqubo yokuKhetha Jikelele asisayi kukhutshwa kwiimpahla ezithunyelwa kumazwe angamalungu e-EU, eUnited Kingdom. Khanada, ...
I-Nvidia ingena kwindalo yonke yemeta
Ngokutsho kweGeek Park, kwinkomfa yasekwindla ye-CTG 2021, u-Huang Renxun waphinda wabonakala ebonisa ihlabathi langaphandle ukuthanda kwakhe kwindalo yonke yemeta. "Indlela yokusebenzisa i-Omniverse kukulinganisa" ngumxholo kulo lonke inqaku. Le ntetho ikwaqulathe itekhnoloji yamva nje kwiinkalo ze-qu...
Imidlalo yaseAsia ngo-2022: Iimidlalo zokwenza umdlalo wokuqala; IFIFA, iPUBG, iDota 2 phakathi kweziganeko ezisibhozo zeembasa
I-Esports yayingumsitho wokubonisa kwiMidlalo ye-Asia ye-2018 eJakarta. I-ESports iya kwenza i-start yayo kwi-Asian Games 2022 kunye neembasa ezinikezelwa kwimidlalo esibhozo, iBhunga le-Olimpiki yase-Asia (OCA) yabhengezwa ngoLwesithathu. Imidlalo esibhozo yeembasa yiFIFA (eyenziwe yi-EA SPORTS), inguqulelo yeMidlalo yaseAsia ...
U-8 mkhulu ngokuphindwe kabini njengo-4, akunjalo? Ewe xa kufikwa kwisisombululo sevidiyo ye-8K / isikrini, yinyani leyo. Isisombululo se-8K sikholisa ukulingana ne-7,680 nge-4,320 pixels, ephindwe kabini isisombululo esithe tye kunye nesisombululo esiphindwe kabini se-4K (3840 x 2160). Kodwa njengoko nonke nina zikrelemnqa zezibalo ninokuthi...
Imithetho ye-EU yokunyanzelisa itshaja ze-USB-C kuzo zonke iifowuni
Abavelisi baya kunyanzeleka ukuba benze isisombululo sokutshaja jikelele kwiifowuni kunye nezixhobo ezincinci zombane, phantsi komgaqo omtsha ocetywayo yiKhomishini yaseYurophu (EC). Injongo kukunciphisa inkunkuma ngokukhuthaza abathengi ukuba baphinde basebenzise iitshaja ezikhoyo xa kuthengwa isixhobo esitsha. Zonke ii-smartphones zithengisiwe ...
Ungayikhetha njani iPC yokudlala
Enkulu ayisoloko ingcono: Awudingi inqaba enkulu ukuze ufumane inkqubo enamacandelo aphezulu. Thenga kuphela inqaba enkulu yedesktop ukuba uyathanda inkangeleko yayo kwaye ufuna indawo eninzi yokufaka uhlaziyo lwexesha elizayo. Fumana i-SSD ukuba kunokwenzeka: Oku kuya kwenza ikhompyuter yakho ikhawuleze ngakumbi kunokulayisha ...
Iimpawu ze-G-Sync kunye ne-Free-Sync
Iimpawu ze-G-Sync Iimonitha ze-G-Sync zihlala ziphethe iprimiyamu yexabiso kuba ziqulathe ihardware eyongezelelweyo efunekayo ukuxhasa inguqulelo kaNvidia yokuhlaziya okuguquguqukayo. Xa i-G-Sync yayintsha (i-Nvidia yazisa ngo-2013), yayiza kukubiza malunga ne-$ 200 eyongezelelweyo ukuthenga inguqulelo ye-G-Sync yesiboniso, zonke ...
I-Guangdong yaseTshayina iyalela ukuba iifektri zinciphise ukusetyenziswa kwamandla njengegridi yemozulu eshushu
Izixeko ezininzi kwiphondo lase China iGuangdong, eyona ndawo iphambili yemveliso, icele umzi-mveliso ukuba uthintele ukusetyenziswa kwamandla ngokunqumamisa ukusebenza iiyure okanye iintsuku njengoko ukusetyenziswa komzi-mveliso ophezulu kudityaniswa nemozulu eshushu kuphazamisa inkqubo yamandla yale ngingqi. Izithintelo zamandla zi-double-whammy for ma...
Indlela yokuthenga i-PC Monitor
Imonitha yifestile kumphefumlo wePC. Ngaphandle komboniso ochanekileyo, yonke into oyenzayo kwinkqubo yakho iya kubonakala ingenamsebenzi, nokuba uyadlala, ubukele okanye uhlela iifoto kunye nevidiyo okanye ufunda nje isicatshulwa kwiiwebhusayithi zakho ozithandayo. Abathengisi be-Hardware bayayiqonda indlela amava atshintsha ngayo nge-dif...
Ukunqongophala kwe-chip kunokujika kube yi-chip oversupply ngo-2023 ithi inkampani yomhlalutyi
Ukunqongophala kwe-chip kunokujika kwi-chip oversupply ngo-2023, ngokutsho kwe-IDC yomhlalutyi. Mhlawumbi ayisosisombululo-sonke kwabo banqwenela i-silicon emitsha yemizobo namhlanje, kodwa, heyi, ubuncinci inika ithemba lokuba le ayizukuhlala ngonaphakade, akunjalo? Ingxelo ye-IDC (nge-Regist...
Eyona 4K yeeMongi zeMidlalo zePC 2021
ngu admin on 21-09-16
Ngeepixels ezinkulu kuza umgangatho womfanekiso omkhulu. Ke ayimangalisi into yokuba abadlali bePC bephosa iimonitha ngesisombululo se-4K. Iphaneli epakisha iipikseli ezizigidi ezisi-8.3 (3840 x 2160) yenza imidlalo oyithandayo ibonakale ibukhali ngendlela emangalisayo kwaye iyinyani. Ukongeza ekubeni sesona sisombululo siphezulu ungasifumana kwig...
Umboniso ogqibeleleyo weTekhnoloji Co., Ltd.